Booliska oo sheegay in lagu weeraro xaafadaha soo galootiga | Somaliska
Booliska ka shaqeeya amaanka xaafadaha soo galootigu u badanyihiin ee Stockholm ayaa cabasho ka muujiyay weeraro joogto ah oo lagu qaado marka ay xaafadahaas u tagaan amaan sugid. Booliska ayaa sheegay in bilihii la soo dhaafay ay siyaaday dhagaxaanta lagu tuurayo baabuurtooda.
Gabar ka mid a ah ciidanka Booliska oo magaceeda qarisay ayaa sheegtay in iyada hadda ka hor wajiga dhagax looga dhuftay. waxay sheegtay in ay cabsi ku tagaan xaafadaha sida Rinkeby oo ay sheegtay in aragtida dhalinyarada ku nool xaafadaas ay ka haystaan booliska in ay tahay mid qaldan oo ku dhisan naceyb iyo cadaadis.
Booliska ayaa hada bilaabay in uu adkeeyo amaankooda marka ay booqanayaan xaafadaha soo galootigu u badanyihiin. Baabuurta Booliska ayaa lagu xiray kaamirooyin si loo aqoonsado dhalinyarada dhagaxaanta ku tuurta Booliska. Waxaa sidoo kale boolisku joojiyeen in ay hal baabuur u diraan xaafadahaas iyadoo hada ugu yaraan labo baabuur ay wada socdaan.
Balse booliska ayaa sheegay in aysan arimahaan xal u ahayn dabeecada dhalinyarada ku nool xaafadahaas. Dhalinyarada qaar ka mid ah oo la wareystay ayaa muujiyay naceybka ay u qabaan booliska, iyagoo ka eed sheegtay in boolisku il gaar ah ku eego haddii ay arkaan dhowr dhalinyaro ah oo sheekeysanaya. Waxay sheegeen in ay doonayaan in boolisku uusan imaan xaafadahooda.
waan kusalaamay adiiga jiimcaala marka xiiga waxaan dhiibanaya araagtidayda iyo waya araanimadayda maha in laga caraaro boliska ama lala dagaalamo hala ilaaliyo sharciiga sweden somaliyey dagaalka wanaagban unaaqaal lakiin sweden madhisnateen hadii dagaal kajiiro
November 8, 2012 at 18:43
FUCK poliska sweden hadi adi 2qofood o ajnabi ah idin arkaan wa idin fiirinayaan cabsi ayaaba ku galeeso
swedhishkana hadi ay 20 iskula socdaan mala fiirinaayo xitaa
fuck u polis
jimcaaale adiga qaxootigan ama soogalootigan somalida ah maalin kasta hal war u qor ma lagu dhahay! , maba la arkaayo adiga oo so qoraayo laba war oo cusub!
Asc, Anniga waxay ila tahay in aan laga cararin Poliska ee ay noqdaan meeshii loo cararayay oo kaalmo la weydiisanayay haddii dhib kugu dhaco, waayo Polisku waa hay’adda ilaalisa sharciga wadan u degsan.
Dhalinyarooy haddii sida ay Polisku sheegayaan ay sax tahay maxay noqon doontaa jawaabta amase gurmadka aad kala kulmi doontaan markii dhibaato amni darro ay idinku dhacdo ood u baahataan inaad Poliska garab weydiisataan(Wacdaan)?.
Ugu danbeyntii waxay ila tahay inaad garab siisaan Polsika si ay u gutaan waajibka ka saaran ilaalinta sharciga.
Poliskana waxaa laga rabaa in ay baaraan ooy ogaadaan sababta keeneysa in dhalinyaradaan dhagxeeyaan ayna xaliyaan is afgaranwaaga ayaga iyo dhalinyarada dhex yaalla si ay u timaado wada shaqeyn ayaga iyo dhalinyarada.
ASC marka hore Saxiibkena Qaaliga Ah oo wararka swedan Nala soo socodsiyo marka Xigta hota Aniga waxan dhihi Lahaa hadaan Nahay soo Galooti waan dhib badanahy wlh ILase haduusan poliska jirin wax kala Soconayo ma Lahan wlh ?
runtii fikradaha kala duwan markaan dhagaysanay waxa moda qofwalba siinuu u arko poliska lkin waxa macqul ah in ay poliska la,aantod in ay suurto gal aysan ahayn in uu wadanka dadka ku nool si ay niyad saafi ah ku seexdan habeynkii hadu aysan polis wadanka jirinba marka walalahyga qali ah sharciga wadanka ilaaliya intaas wa iiga wano iyo fikradayda wa anigo ah mr qurbaani oo idin leh wcw